डाक्टर सडकमा उत्रिएपछि बिरामीको बिजोग! - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
डाक्टर सडकमा उत्रिएपछि बिरामीको बिजोग!
बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा वन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरिन्। तर, उनको अनुरोधलाई चिकित्सकले टेरेनन्। वन्तले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो पेशामा सहभागी भइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। तर चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।